Inona ny vokatrao lehibe?
Ny vokatray lehibe indrindra dia ny jiro horonantsary isan-karazany toy ny Aluminium Alloy LED Light, Aluminium Alloy RGB / Jiro miloko, jiro famenoana peratra, Jiro LED mahazatra ary kojakoja mifandraika amin'izany.
Manaiky ny famindrana banky T / T, Western Union ary PayPal izahay.
Inona ny INCOTERMS fandefasana anao?
EXW na FOB.
Mizaha toetra ny entanao rehetra alohan'ny fandefasana azy ve ianao?
Eny, hizahan-toetra azy ireo izahay. Manana fomba fandinihana henjana izahay manomboka amin'ny akora ka hatramin'ny fitahirizana entana ao amin'ny trano fanatobiana entana.
Ahoana ny amin'ny fandefasana?
Raha manana mpandefa anao any Chine ianao dia handefa entana any amin'ny adiresy voatondro an'ny mpampandroso anao. Raha tsy manana ny mpandefa anao manokana ianao, dia hanonona ny vidin'ny fandefasana ary handamina ny fandefasana ho anao. Hanaraka akaiky ny fampianaranao momba ny fandefasana entana izahay.
Azonao atao ve ny manolotra serivisy OEM & ODM?
Eny, manome ny serivisy avy amin'ny famolavolana ID, R&D, fanamboarana ary fitaterana izahay. Raisinay koa ny baiko OEM sy ODM.
Miankina amin'ny ankamaroan'ny modely, 500-1000 pcs ny MOQ.
Tahaka ny ahoana ny fonosanao?
Hofonosinay tsara ilay entana mba hahazoana antoka fa tsy ho simba mandritra ny fandefasana ela. Ary hanaraka tsara ny toromarika omenao izahay.
Inona ny fotoana itarihana?
Miankina amin'ny habetsaky ny baikonao izany, mazàna 3-5 andro no ilaina kely. Ho an'ny kaomandy OEM dia maharitra 20-30 andro eo ho eo.
Azoko atao ve ny manana ny santionany?
Eny, halefanay aminao ny santionany ho anao amin'ny fizahana sy fanamarinana kalitao. Tsy maimaimpoana ny santionany rehetra, azo ifampiraharahana.
Ho an'ny fiaraha-miasa voalohany dia mahatsiaro ho tsy azo antoka ny handoa mivantana izahay, inona no tokony hataonay?
Azonao atao ny mametraka ny baiko amin'ny alàlan'ny tranokala ofisialinay.
Inona ny serivisy fiantohana anao?
Manolotra fiantohana mandritra ny herintaona izahay, hanova iray vaovao iray manontolo izahay aorian'ny handraisanay ny entana tsy mandeha na azonao atao tsotra fotsiny ny manao horonantsary fohy hanaporofoana fa simba izany ary avy eo handefa iray vaovao amin'ny filaharany manaraka izahay.